50W Bipute Ugwu Igwe Uzo Kwadoro Ikwunigwe China Manufacturer
Nkọwa:Zipu Ugwu Mbara Igwe,Ebube Mbara Igwe,Igwe ọkụ na-acha ọkụ na-acha ọkụ nke anyanwụ
Home > Ngwaahịa > Ebube Ogologo > Mbara Igwe > 50W Bipute Ugwu Igwe Uzo Kwadoro Ikwunigwe
Ewube Ugwu Elu Ugwu anyị dị na 20000mAh Lithium battery, Led Solar Poles Lights nwere ike ịrụ ọrụ ruo awa 10-12 n'abalị ma ọ bụrụ na batrị zuru ezu n'ụbọchị. Nhazi ọhụrụ na mgbalite elekere nwere ìhè na-egbuke egbuke na ogologo oge ọrụ. Ngwá ọkụ na-acha ọkụ na-acha ọkụ nke anyanwụ Na-enye ìhè na oghere ndị nwere ike iji rụọ ọrụ zuru oke n'ụbọchị.
Ọkụ anyị na-echebe site na transperent plastic cover ndị ọzọ waterproof na dampproof, nke nwere ike izere ọkụ bulbs ka mebiri emebi na-eme ka anyanwụ ogige oriọna post na mmiri ozuzo, snow, ọkụ na ifufe. Anyị na-enye ọrụ ndebanye maka afọ atọ maka ọkụ ọkụ anyanwụ . Nke a na-eme ka ìhè na-acha ọkụ n'emepepụ ga-agbanyụ na mgbede ma gbanyụọ n'ehihie mgbe ọ gbanyechara ọkụ.
50W Azụmahịa nke Ahịa nke Ahịa Kpọtụrụ ugbu a
Anyanwụ dịpụrụ adịpụ kwadoro ọkụ ọkụ 50 Watt Kpọtụrụ ugbu a
Zipu Ugwu Mbara Igwe Ebube Mbara Igwe Igwe ọkụ na-acha ọkụ na-acha ọkụ nke anyanwụ Mbara Igwe Mbara Igwe 30a Ewubere Mbara Igwe 20W Ebube Ebube Mbara Igwe 20w 150lm / w Mbara Igwe Mbara Igwe Mbara Igwe Amazon